မြန်မာ - တရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့မှုများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအစည်းအဝေး (JBTCCC) အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့မှုများ
မြန်မာ - တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲများကို နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နှစ်နိုင်ငံအလှည့်ကျ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၂၅.၃.၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ခုျပ်ဆိုခဲ့သော မြန်မာ - တရုတ်နယ်စပ်ဒေသများ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ စာခုျပ်အရ နှစ်နိုင်ငံကုန်စည်ပြပွဲများကို တစ်လှည့်စီ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့မှုမှာ အောက်ပါအ တိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
ပထမအကြိမ် - ၁၈-၁၂-၂၀၀၁မှ၂၃-၁၂-၂၀၀၁ထိ(ကြယ်ဂေါင်မြိ့ု)
ဒုတိယအကြိမ် - ၁၅-၁၂-၂၀၀၂ မှ ၁၉-၁၂-၂၀၀၂ ထိ (မူဆယ်မြို့)
တတိယအကြိမ် - ၂၈-၁၂-၂၀၀၃ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၀၃ထိ(မန်စီမြိ့ု)
စတုတ္ထအကြိမ် - ၁၈-၁၂-၂၀၀၄ မှ ၂၂-၁၂-၂၀၀၄ ထိ (မူဆယ်မြိ့ု)
ပဉ္မမအကြိမ် - ၁၂-၁၂-၂၀၀၅ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၀၅ ထိ(ကြယ်ဂေါင်မြိ့ု)
ဆဌမအကြိမ် - ၁၈-၁၂-၂၀၀၆ မှ ၂၀-၁၂-၂၀၀၆ ထိ(မူဆယ်မြိ့ု)
သတ္တမအကြိမ် - ၁၀-၁၂-၂၀၀၇မှ၁၄-၁၂-၂၀၀ထိ(ကြယ်ဂေါင်မြိ့ု)
အဌမအကြိမ် - ၁၇-၁၂-၂၀၀၈ မှ ၁၉-၁၂-၂၀၀၈ ထိ (မူဆယ်မြိ့ု)
နဝမအကြိမ် - ၂-၁၂-၂၀၀၉မှ၆-၁၂-၂၀၀၉အထိ (ကြယ်ဂေါင်မြိ့ု)
ဒသမအကြိမ် - ၂၉-၄-၂၀၁၁ မှ ၁-၅-၂၀၁၁ (မူဆယ်မြိ့ု)
( ၁၁ ) ကြိမ် - ၈-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၁၂-၁၂-၂၀၁၁ (ကြယ်ဂေါင်မြိ့ု)
(၁၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ - တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင် ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ - တရုတ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တိုးမြှင့်စေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (Joint Border Trade Cooperating and Coordinating Committee – JBTCCC) ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် မှစတင်၍ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ မြန်မာဘက်မှ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးခုျပ်က ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးခုျပ်က တရုတ်ဘက်မှ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကော်မတီပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နှစ်စဉ် မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးကုန်စည်ပြပွဲကာလအတွင်း ကော်မတီအစည်းအဝေးကို ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ကုန်စည် ပြပွဲနှင့်အတူ JBTCCC အစည်းအဝေးများကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလျှက်ရှိရာ ယခုနှစ်တွင် အဌမအကြိမ် မြောက် JBTCCC အစည်းအဝေးကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်သွယ်မှု အတားအဆီးများ လျှော့ချရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံလူဝင်/ လူထွက်နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လွယ်ကူ လျင်မြန်စေရေး ကိစ္စရပ်များ၊ အခွန်လျော့ပေါ့ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၂ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ- တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲ ပါဝင်ဆင်နွှဲစို့
မြန်မာ- တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲကြီးဟာ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကြီး များရဲ့ သဘော တူညီချက် အရ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မူဆယ် (၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်နဲ့ တရုတ် နိုင်ငံဘက် ရွှေလီတို့တွင် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် ကုန်စည်ပြပွဲမှာ မြန်မာဘက်မှာ ပြခန်းပေါင်း (၁၀၈)ခန်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်က ပြခန်းပေါင်း (၁၀၈)ခန်းနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ လာအို၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွေ ကိုလည်း ပြခန်း (၂)ခန်း ကျစီ ဖိတ်ကြားပြသ စေခဲ့ပါတယ်။
ယခင်နှစ်များမှာ ကုန်စည်ပြပွဲကို လာရောက်ကြတဲ့ မြန်မာ- တရုတ် ဧည့်ပရိတ်သတ်များ မှာလည်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကုန်စည်ကူးလူး ရောင်းဝယ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြသကြမယ့် ကုန်စည် ပြပွဲများ ဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော် အဆင့်နှင့် အညီ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ငံရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ ကုန်သည်အသင်း အဖွဲ့များကလည်း သက်ဆိုင်ရာ အလိုက် ထိထိ ရောက်ရောက် ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြား သံတမန်တွေကိုလည်း အဲဒီပြပွဲမှာ ဖိတ်ကြားပြီး ပါဝင်ပြသခဲ့ ကြပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံဘက်က စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးက အဲဒီ ကုန်စည်ပြပွဲ တွေမှာ နှစ်စဉ် တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပပြီးတာနဲ့ တဆက်တည်း နှစ်ဖက်နိုင်ငံက တက်ရောက် ခဲ့ကြတဲ့ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများဟာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး ကုန်သွယ်မှု ပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နည်းလမ်းကောင်း များစွာဖြင့် ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (JBTCCC) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့် အစည်းအဝေးကို ပူးပေါင်း ကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကိုတော့ တစ်နှစ်မှ တစ်ကြိမ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်က ဦးဆောင်ပြီး နှစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီ အသင်းအဖွဲ့များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး၊ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု အခက်အခဲတွေကို ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း အဖြေရှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ကုန်စည်ပြပွဲကို မိမိနိုင်ငံဘက်မှ တာဝန်ယူ ကျင်းပဖို့ အလှည့်ကျခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် (၁၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ- တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲ (မူဆယ်)ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက်မှ (၁၁)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ကုန်စည်ပြပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံရှိ အခြားပြည်နယ်များဖြစ်တဲ့ လင်ချန်း မဲဟောင်ဆောင် ပြည်နယ်များ ဘက်ကကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များလည်း လာရောက်လေ့လာကြမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ အခြား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲအနေနဲ့ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲများကိုတော့ နှစ်စဉ်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယခုနှစ်ကုန်စည်ပြပွဲမှာကုန်သည်များပြသတဲ့ ပြခန်းပေါင်း(၂၀၀)ကျော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက် မှ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ သမဝါယမအသင်းများ၊ ကုန်သည်အသင်းများ၊ စက်မှုဇုန်များမှ ပူပေါင်းပါဝင်ပြသသွားကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ပြသမယ့်ပြခန်းတွေမှာ ကျောက်မျက် ရတနာများ၊ သစ်အချော ထည်များ၊ လယ်ယာ ထွက်ကုန်များ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တိုင်းရင်းဆေးများ၊ စက်မှုဇုန်များမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ လူသုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းများ ပါဝင် ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အတွက် မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေနဲ့ အရေးပါရုံသာမက ဒေသတွင်း အရှေ့တောင် အာရှနှင့် တောင်အာရှနိုင်ငံများအကြား မဟာဗျူဟာ ကျတဲ့စီးပွားရေး ဇုန်ဖြစ်တဲ့အပြင် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ အခြေအနေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ (၁၀၇၆.၈၁၁) အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁၈၀၀.၂၈၂) အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ (၂၉၈၅.၄၂၄) အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းအထိ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကုန်သွယ်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့် ကုန်သွယ် နိုင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နှစ်ဖက်နိုင်ငံရှိ ကုန်သည် များအတွက် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လျင်မြန်နိုင်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်နိုင်ခြင်း၊ မိမိတို့ရဲ့ ဈေးကွက်ကောင်းများ ပိုမို ရရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုလာတော့မည်ဖြစ် ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
ပို့ကုန်ဒေါ်လာ ၁၄၄ သန်းကျော်ဖိုး အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည့် နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲ
ယခုနှစ် မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည် ပြပွဲတွင် မြန်မာ ကုမ္ပဏီ ၉ ခုနဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၈ ခု၊ စုစုပေါင်း ၁၇ ခု တို့မှ မြန်မာ့ပို့ကုန် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ ၁၄၄ သန်း ကျော်ဖိုးနှင့် သွင်းကုန် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ ၄၁ သန်း ကျော်ဖိုး စုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၁၈၅ သန်းကျော် အရောင်း အဝယ် စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ မြန်မာ့ ပို့ကုန်များ အနက် ရာဘာကို ကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးသန်း လေးဆယ်ကျော်ဖိုး ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် စုစုပေါင်း ပို့ကုန် စာချုပ်၏ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပို့ကုန် အမယ်များမှာ ငရှဉ့်၊ ကဏန်း၊ ဆီးဆံ၊ ချဉ်ပေါင် ဖာလာ၊ နေလဲစေ့၊ နှမ်းဖြူ၊ နှမ်းနက်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပြောင်းဖူးစေ့၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ငါးဆားနယ်၊ ငါးခြောက်၊ ငါးလိပ်ကျောက် ခြောက်၊ ငါးပူတင်း၊ ငါးစီပေါင်း၊ ငါးကြင်း၊ ပုစွန်၊ ကင်းမွန်၊ ပင်လယ်မျှော့၊ ခရု တို့ဖြစ် ပါတယ်။ သွင်းကုန် အမယ်များမှာ ဓာတ်ခဲကုန်ကြမ်း၊ ဆပ်ပြာ ကုန်ကြမ်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်း (ဟန်းဆက်) ၊ အထည် အလိပ်၊ ဆေးဝါး၊ သတ္ထုသွင်းသုံး စက် ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ဆေး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၅ သန်းကျော် ခုျပ်ဆို နိုင်ခဲ့မှုထက် ယခုနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော်ဖိုး ပိုမို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မနှစ်က ပို့ကုန် ကန်ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းနီးပါးခန့်သာ ခုျပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ပို့ကုန်ကန် ဒေါ် လာ ၁၄၄ သန်းကျော်ဖိုး ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့သည့် အတွက် ယခင် နှစ်ထက် နှစ်ဆခွဲကျော် ပိုမို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုနှစ် မြန်မာ - တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ပို့ကုန်/ သွင်းကုန် အရောင်း အဝယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပွဲကို မူဆယ်မြို့ မူဆယ် - နမ်းခမ်း နယ်စပ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းရုံးတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၌ ၁၂ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲ (မူဆယ်) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၀၉၀၀ ချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်၌ ခမ်းနား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ အရှေ့ မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စိုး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ပွင့်ဆန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိုင်းအောင်မြတ် နှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် လာအို သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဘူကာဂတ် ဆာရာရတ်၊ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၊ ယူနန် ပြည်နယ် ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မစ္စတာ ကောင်းစုရှင်း၊ ရန်ကုန် အခြေစိုက် ဂျပန်နိုင်ငံ ပြည်ပ ကုန်သွယ် ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့ (JETRO) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ ဖူမီတို တာကာ ဟာရှီ၊ မန္တလေး အခြေစိုက် တရုတ် နိုင်ငံ စီးပွားရေး ကောင်စစ်ဝန် မစ္စတာ လီရန်ဇီကွမ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာ့ခ်ခရိုင်မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် ဌာန ဆိုင်ရာများမှ တာဝန် ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည် များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် နှင့် ညီနောင် အသင်း အဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင် များနှင့် ဒေသခံ လုပ်သား ပြည်သူများ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံဘက်မှ တယ်ဟုန်တိုင်း၊ ယူနန် ပြည်နယ်၊ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မစ္စတာ ကောင်းစုရှင်း၊ ယူနန် ပြည်နယ်၊ ကုန်သွယ်ရေး ဌာန၊ သုတေသီ ချုပ် မစ္စတာ ဝမ်ကျင့်ဝေ၊ တယ်ဟုန် တိုင်းပြည်သူ့ အစိုးရ၊ ဒုတိယ တိုင်းမှူး မစ္စတာ စူးဟုန်တောင့်၊ ယူနန် ပြည်နယ် ကုန်သွယ်ရေး ဌာန၊ တယ်ဟုန် ပြည်နယ်ခွဲ ပါတီ၊ ရွှေလီ ပါတီ ကော်မတီ၊ ရွှေလီမြို့ ပြည်သူ့ အစိုးရ၊ ယူနန် ပြည်နယ် ကုန်သွယ်ရေး တိုးမြှင့်ရေး အသင်း၊ တယ်ဟုန် ပြည်နယ်ခွဲ ကုန်သွယ်ရေး ဌာန၊ ယူနန် ပြည်နယ် နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန၊ ယူနန် ပြည်နယ် နယ်စပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီး ဌာန၊ ပိုးမွှား စစ်ဆေးရေး ဌာန၊ တယ်ဟုန် ပြည်နယ် တံခါးဖွင့် စီမံကိန်း၊ သတင်း နှင့် စာအုပ် ထုတ်ဝေရေး ဌာန တို့မှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်ဟု သတင်းရ ရှိပါသည်။
ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ပွင့်ဆန်း၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေး၊ တယ်ဟုန်တိုင်း၊ ယူနန် ပြည်နယ်၊ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မစ္စတာ ကောင်းစုရှင်း နှင့် ယူနန် ပြည်နယ်၊ ကုန်သွယ်ရေး ဌာန၊ သုတေသီ ချုပ် မစ္စတာ ဝမ်ကျင့်ဝေ တို့မှ အမှာ စကားများ အသီးသီး မြွတ်ကြားခဲ့ ကြကြောင်း သိရပါသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၂ မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည် ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား နှစ်ဘက် လူကြီးများက ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ကြပြီး ခင်းကျင်း ပြသ ထားသော ပြခန်း များအား လှည့်လည် ကြည့်ရှု ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။
ပြပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် တရုတ် နိုင်ငံမှ ပြခန်း စုစုပေါင်း ၂၃၀ ကျော် ပါဝင် ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်မှ ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ သမဝါယမ အသင်း အဖွဲ့များ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း ရှင်များ အသင်းချုပ် နှင့် ညီနောင် အသင်း အဖွဲ့များ၊ ကုမ္ပဏီများမှ ပါဝင် ပြသခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ကုန်စည်ပြပွဲတွင် ပြသ ခဲ့သည့် မြန်မာ့ လယ်ယာ ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သစ် အချော ထည်များ၊ ကျောက်စီ ပန်းချီကားများ၊ ငွေချည် ရွှေချည်ထိုးများ၊ ငွေထည်များ၊ ကျောက်စိမ်း လက်ဝတ် ရတနာများ နှင့် အမှတ်တရ ပစ္စည်းများ၊ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန် များကို တရုတ်နှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှ ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြပွဲလာ ဧည့်သည်တော် များက အထူးပင် စိတ်ဝင် တစား ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယခုနှစ် ကုန်စည် ပြပွဲတွင် တရုတ် နိုင်ငံဘက်မှ လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် များကို ပြသခဲ့ရာ ပြပွဲသို့ လာရောက်ကြ သူများမှ အထူး စိတ်ဝင် တစား ကြည့်ရှုခဲ့ ကြပါသည်။
ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား အပြီး ၁၀၃၀ နာရီချိန်တွင် မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ပွင့်ဆန်း နှင့် ယူနန် ပြည်နယ်၊ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မစ္စတာ ကောင်းစုရှင်း တို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ် များကို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
အဆိုပါနေ့ နေ့လည်ပိုင်း ၁၄၀၀ ချိန်တွင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဦးခင်မောင်လေး ဦးဆောင်သော မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ယူနန် ပြည်နယ် ကုန်သွယ်ရေး ဌာနမှ သုတေသီချုပ် မစ္စတာ ဝမ်ကျင့်ဝေ ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့သည် မူဆယ် - နမ့်ခမ်း ကုန်သည် အသင်း ခန်းမ၌ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (Joint Border Trade Cooperating and Coordinating Committee) အစည်း အဝေးကို ဆက်လက် ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေ ကိစ္စရပ်များဖြစ်သော စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ၊ လယ်ယာထွက် ကုန် ပစ္စည်းများ ပိုမို တိုးတက် တင်ပို့နိုင်ရေး၊ ယူနန် ပြည်နယ် အပြင် အခြား ပြည်နယ်များမှ ကုန်သည်များ မူဆယ် (၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်သို့ လာရောက် နိုင်ရေး၊ ဘဏ် လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေရေး၊ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များအား ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စားသောက်ကုန် နှင့် ဆေးဝါးများ အတွက် ထုတ်ဝေ ပေးသည့် ထောက်ခံစာများ အသိ အမှတ် ပြုရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ပြပွဲ ဒုတိယ နေ့ဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မူဆယ် - နမ့်ခမ်း ကုန်သည် အသင်း အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ Business Matching နှင့် မြန်မာ - တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်း အရောင်း အဝယ် စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်း အနားကို ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်း အနားတွင် မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်မှ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေး နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ ဘက်မှ တယ်ဟုန် ပြည်နယ် အစိုးရ၊ ဒုတိယ အတွင်းဝန်ချုပ် မစ္စတာ စိမ်းဖုန်း တို့မှ အမှာ စကားများ အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာ ကုမ္ပဏီ (၉) ခုနှင့် တရုတ် ကုမ္ပဏီ (၈) ခုတို့မှ မြန်မာ့ပို့ကုန် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ ၁၄၄ သန်းကျော်ဖိုး နှင့် သွင်းကုန် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ ၄၁ သန်း နှင့် ယွမ် ၁၉ သန်းကျော် တန်ဖိုး ရှိသော အရောင်း အဝယ် စာချုပ်များအား ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ ပါသည်။
ပြပွဲ တတိယနေ့ ဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ ချိန်တွင် မူဆယ် - နမ့်ခမ်း ကုန်သည် အသင်း အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ ဒုတိယ အကြိမ် မြန်မာ - တရုတ် နှစ် နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ပွဲအား စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ပွင့်ဆန်း နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ ရွှေလီ အထူး တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး စမ်းသပ်ဇုန် ဥက္ကဌ (တယ်ဟုန် ပြည်နယ်ခွဲ ပါတီ ဗဟို ကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ) မစ္စတာ ဝမ်ကျင့်ချန်တို့ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ကြပြီး ရွှေလီမြို့ နှင့် မူဆယ်မြို့ တို့တွင် အထူး စီးပွားရေး ဇုန် တည်ထောင် အကောင် အထည် ဖော်မည့် ကိစ္စရပ် နှင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု ပိုမို လျင်မြန် တိုးတက် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များကို ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် တရုတ် နိုင်ငံတို့သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည် ပြပွဲများကို အိမ်ရှင် နိုင်ငံ အဖြစ် တစ်လှည့်စီ အလှည့်ကျ ကျင်းပ လာခဲ့ရာ ယခု ကျင်းပသော မြန်မာ - တရုတ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည် ပြပွဲမှာ ၁၂ ကြိမ်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Let’s celebrate the 12th Myanmar-China Border Trade Fair
According to the agreement of Myanmar-China Border Management and Coordination, Myanmar – China Border Trade Fair has been held annually on alternate base in Myanmar (Muse) and China (Rhuli) since the year 2001.The first Myanmar-China Border Trade Fair was held in Ruili, southwest China’s Yunnan Province.
This year’s Myanmar-China Border Trade Fair will be held in Myanmar, location on Muse 105th Mile Border Trade Zone in Northern Shan State of the country from December,9to December11.
Withatotal of 230 booths from both sides, other neighboring countries such as India, Thailand, Laos, and Bangladesh will also take place the fair by2booths each. Myanmar will exhibit its agricultural produces and marine products, gems and jade, traditional handicrafts, traditional medicine and furniture, and household goods manufactured by domestic industry zones.
The previous fairs were participated by companies, enterprises, and visitors from both countries as well as those from other neighboring countries. In line with the national level trade fair, participation of Ministries concerned and various Chamber of Commerce and Industry Associations actively support to celebrate greatly.
At the opening day of the fair, senior officials from both sides will holdameeting in which the trade matters will be discussed by searching the possible ways and approaches to solve the obstacles and barriers. Moreover, the two countries' joint committee for border trade (JBTCCC) will meet at the fair aiming for promoting and facilitating the bilateral trade between the two countries. Then, business matching and signing of sale contract ceremony will be held as usual.
It is noted that some companies and enterprises from Linchang (China) and from Mae Hong Son (Thailand) will come and learn this year’s fair.
Since Muse 105th Mile Trade zone is important for Myanmar - China Border Trade as well as isaStrategic Trade Zone between South Asia region and South
East Asia region, it helps to improve the existing friendship and cooperation between the two countries.
According to Myanmar’s official figures, Myanmar – China bilateral trade amounted to (986.59) million U.S. dollars in FY 2008 - 2009, (1076.811) million U.S. dollars in FY 2009 - 2010, (1800.282) million U.S. dollars in FY 2010-2011, (2985.424) million U.S. dollars in FY 2011-2012 , respectively. We can see that the bilateral border trade has been increasing year after year.
It is obviously seen that the good opportunities will get more and more because of facilitating the flow of goods, promoting the trade volume, achieving the market access through holding bilateral border trade fairs.